Baro inaad barato Cilmiga Dijital ah iyo Kumbuyuutarka
ku gelin xaalad waxbarasho:
in la diyaariyo koorsooyin kombuyuutar oo la taaban karo,
si loo abaabulo koorsooyinkan si horumar leh,
in wax barida laga dhaqan geliyo fasalka dhexdiisa: laga bilaabo dhaqdhaqaaqa ilaa taageerada ardayga,
si loo maareeyo qiimaynta waxbarashadii hore iyo hagaajinta koorsada.
su'aalo oo naqdi hab-dhaqankaaga waxbarida
la shaqee software-ka iyo agabka ururka ee u gaarka ah koorsadan
Mooc-kan waxa uu suurtogal ka dhigayaa in la helo ama la xoojiyo saldhigyada wax-ku-oolka ah ee waxbaridda NSIda iyada oo loo marayo barbaarin ficil ahaan. Thanks to hawlaha jilitaanka xirfadlayaasha ah, is-weydaarsiga bulshada dhexdeeda ee waxqabadka, qiimeynta asaagga iyo daba-galka casharrada cilmi-baarista iyo cilmiga kumbuyuutarka, waxay suurtogal ka dhigaysaa in la barto barashada cilmiga kumbuyuutarka ee heerka dugsiga sare ama in dib loo qaado ka hab-waxbaridda iyaga u gaar ah.
Waa qayb ka mid ah koorsada tabobarka oo dhamaystiran, oo ay ku jirto marka la eego aasaaska sayniska kombiyuutarka ee lagu bixiyo wehel MOOC "Tirooyinka iyo Sayniska Kombiyuutarka: aasaaska" sidoo kale laga heli karo Fun.
Faransiiska, tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad u diyaargarowdo inaad wax ku dhigto heerka dugsiga sare iyadoo la marayo CAPES
Baro inaad barato Cilmiga Dijital ah iyo Kumbuyuutarka Janaayo 17th, 2022Tranquillus
READ Wax ka baro Sayniska Xogta iyo caqabadihiisa
socdaMeditation iyo daawada 2021: ammaanta daryeelka?
Aasaaska waxqabadka bulshada
Taageerada loo-shaqeeyaha ee shaqaalaha naafada ah
CPF - Koontada tababarka shaqsiga